Theresa May oo ka bad-baaday Mooshin codka kalsoonida • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Theresa May oo ka bad-baaday Mooshin codka kalsoonida
Theresa May oo ka bad-baaday Mooshin codka kalsoonida
December 13, 2018 - By: Hanad Askar
Xisbi Xaakimka Conservative Party ayaa xalay codka kalsoonida u qaaday Raysalwasaare Theresa May oo ay mooshin ka keeneen xildhibaano ka tirsan xisbigeeda.
Ms.May oo xiligan wajaheysa xiisado iyo mawjado siyaasadeed oo la xariira qorshaheeda Brexit ayaa ka badbaaday shirqool-siyaasadeed oo ay la damacsanaayeen garabka midig ee xagjirka xisbigeeda oo doonayey inay kursiga ka tuuraan.
Balse May ayaa heshay 200 codka Xildhibaanada xisbigeeda, halka kooxda kasoo horjeeda ay heleen 117 cod oo kaliya.
Theresa May ayaa iyadu horey usii shaacisay inaysan markale xilka u tartami doonin doorashada 2022, arrintaasi oo wiiqisay awooda kooxda kacdoonka ka dhex waday xisbigeeda. Guusha Ms.May ee mooshinkan ayaa hada ku khasbeysa kooxaha kasoo horjeeda ee xisbigeeda inaysan mooshin kale ka keenin karin muddo 1 sano ah.
Dhinaca kale Raysalwasaaraha UK oo aan weli xal u helin diidmada xoogan ee Baarlamaanka Ingiriiska uga horyimid qorshaheeda Brexit iyo heshiiskii ay la gashay dalalka kale ee EU-da. Codbixintii Baarlamaanka Ingiriiska u qaadi lahaa heshiiska EU-da ee Brexit oo la filayey iney dhacdo Salaasadii ayey Ms.May dib u dhigtay kadib markii ay ogaatay inaysan heysan codod ku filan.
Ms.May ayaa maanta oo Khamiis ah safar ku tageysa magaalada Brussels iyadoo markale ka codsan doonta madaxda Midowga Yurub inay wax ka bedalaan qaar kamid ah qodobadii ay horey ugu heshiiyeen.